Fanovana ny rano ho divay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Mampody rano ho divay
Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitantara tantara mahaliana iray izay nitranga teo ho eo tamin’ny fiandohan’ny fanompoan’i Jesosy teto an-tany: Nankany amin’ny fampakaram-bady Izy ka nanova ny rano ho divay. Ity tantara ity dia tsy mahazatra amin'ny lafiny maro: ny zava-nitranga tao dia toa fahagagana kely, mitovy amin'ny tetika majika fa tsy asa mesia. Na dia nisakana tarehin-javatra somary mahamenatra aza izany, dia tsy niresaka mivantana ny fijalian’ny olombelona tahaka ny fanasitranana nataon’i Jesosy. Fahagagana natao manokana izay nitranga tsy fantatry ny mpandray tombony - na izany aza, dia famantarana izay nanambara ny voninahitr'i Jesosy (Jao. 2,11).
Ny asan'ny literatiora amin'ity tantara ity dia somary manahiran-tsaina. Nahafantatra bebe kokoa momba ny fahagagana nataon’i Jesosy i Jaona, noho izay mety ho nosaintsaininy tao amin’ny asa sorany, kanefa izany no nofidiny ho fiandohan’ny filazantsarany. Ahoana no ahafahan’ny tanjon’i Jaona mandresy lahatra antsika fa i Jesoa no Kristy (Jaona 20,30:31–)? Ahoana no ampisehoan’izy io fa izy no Mesia fa tsy mpanao ody (araka ny nolazain’ny Talmoda jiosy tatỳ aoriana)?
Andao hodinihintsika akaiky ny tantara. Manomboka amin'ny mariazy ao Cana, tanàna kely iray any Galilia. Toa tsy dia misy dikany loatra ilay toerana - fa ny fampakaram-bady io. Jesosy dia nanao ny famantarana voalohany ho Mesia amin'ny fampakaram-bady.
Ny fampakaram-bady no fety lehibe sy manan-danja indrindra amin'ny jiosy - fankalazana herinandro maharitra dia nanambara ny sata ara-tsosialin'ny fianakaviana vaovao ao anatin'ny vondron'olona. Ny fampakaram-bady dia fankalazana fifaliana toy izany izay matetika miresaka amin'ny fanasana fampakaram-bady ny olona rehefa te hilaza ny fitahian'ny vanim-potoanan'ny Mesia. I Jesosy mihitsy no nampiasa io sary io hilazana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanoharana sasany.
Matetika izy dia nanao fahagagana tamin'ny fiainana an'izao tontolo izao mba hanazavana ny fahamarinana ara-panahy. Nanasitrana ny olona izy, mba hanehoana fa manana fahefana hamela heloka. Nanozona ny aviavy iray izy ho famantarana ny fitsaran'Andriamanitra ho lehibe izay tsy hahatazona ny tempoly. Nanasitrana tamin'ny Sabata Izy mba hanehoany ny foto-keviny amin'ny fialan-tsasatra. Natsangany indray ny maty mba hanehoana fa nitsangan-ko velona izy ary fiainana. Namono olona an'arivony izy ireo mba hamantarana fa mofo ny fiainana izy. Ao anatin'ny fahagagana izay nojerentsika dia nomeny fitahiana be dia be ho an'ny fampakaram-bady mba hanehoana fa Izy no hikarakara ny fanasin'ny Mesia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Lany ny divay ka nampandre an’i Jesoa i Maria, ka hoy i Jesoa taminy: ... Moa mifaninona akory izaho sy Ianao? (V. 4, Baiboly Zurich). Sa raha lazaina amin'ny teny hafa, inona no ifandraisako amin'izany? tsy mbola tonga ny fotoako. Ary na dia tsy tonga aza ny fotoana, dia nanao zavatra i Jesosy. Amin’izao fotoana izao, i Jaona dia manondro fa i Jesosy dia mialoha ny fotoanany amin’ny zavatra ataony. Mbola tsy tonga ny fanasan’ny Mesia, nefa nanao zavatra i Jesosy. Ny Taonan’ny Mesia dia efa nanomboka ela be talohan’ny niposahan’ny andro tamin’ny fahatanterahany. Nanantena i Maria fa hanao zavatra i Jesosy; fa izy nandidy ny mpanompony hanao izay rehetra nandidiany azy. Tsy fantatsika raha nieritreritra fahagagana izy na hivily kely mankany amin'ny tsenan'ny divay akaiky indrindra.
Ny rano ampiasaina amin'ny fanasana fombafomba dia lasa divay
Ny zava-nisy tamin’izao fotoana izao dia nisy siny rano vato enina teo akaiky teo, saingy tsy nitovy tamin’ny siny rano mahazatra. Milaza amintsika i Jaona fa ireny no fitoeran-javatra nampiasain’ny Jiosy ho an’ny fombafombam-pivavahana. (Ho an'ny fanadiovan'izy ireo, dia naleon'izy ireo ny rano avy amin'ny kaontenera vato fa tsy ny siny seramika ampiasaina amin'ny fomba hafa.) Samy nanana rano maherin'ny 80 litatra izy ireo - be loatra ka tsy azo alaina sy arotsaka. Na ahoana na ahoana, ny rano be dia be ho an`ny fombafomba ablutions. Tsy maintsy nankalazaina tamin'ny ambaratonga lehibe tokoa io mariazy tao Kana io!
Toa tena manan-danja tokoa ity ampahany amin’ny tantara ity – saika hanova rano sasany ho divay ho an’ny fombafomban’ny Jiosy i Jesosy. Izany dia nampiseho fiovana teo amin’ny Jodaisma, ary nampitoviana tamin’ny fanaovana fanadiovana ara-pivavahana mihitsy aza. Alao sary an-tsaina izay mety ho nitranga raha naniry hanasa tanana indray ny vahiny — ho nankany amin’ny siny misy rano izy ireo ary samy feno divay! Tsy nisy rano intsony ho an'ny fombafomban'izy ireo. Noho izany ny fanadiovana ara-panahy tamin’ny alalan’ny ran’i Jesosy dia nisolo ny fombafomba fanasan-damba. Nanao ireny fombafomba ireny i Jesosy, ary nosoloiny zavatra tsara lavitra, dia ny tenany. Tena mety; fa Jesosy koa dia nanamarina tanteraka ny fombafomba sy nanao azy ho lany andro. Amin'ny vanim-potoanan'ny Mesia dia tsy misy toerana hanaovana fanadiovana fombafomba intsony. Dia nanala divay ny mpanompo ka nitondra izany tany amin'ny mpikarakara, izay nilaza tamin'ny mpampakatra hoe: Samia manome ny divay tsara aloha, ary raha mamo izy, dia vao mainka; fa ianareo kosa efa nitahiry ny divay tsara mandraka ankehitriny (and 7).
Nahoana araka ny eritreritrao no noraketin’i Jaona an-tsoratra ireo teny ireo? Ho torohevitra ho an'ny fanasambe ho avy? Sa mba hampisehoana fotsiny hoe manao divay tsara i Jesosy? Tsia, ny tiako holazaina dia noho ny heviny ara-panoharana. Ny Jiosy dia toy ny olona nisotro divay (efa nanao ny fombafombam-pivavahana) ela loatra ka tsy nahatsikaritra fa nisy zavatra tsara kokoa tonga. Ny tenin’i Maria: Tsy manana divay intsony ianao (and. 3) dia tsy misy dikany afa-tsy ny tsy misy dikany ara-panahy intsony ny fombafomban’ny Jiosy. Nitondra zava-baovao sy tsara kokoa i Jesosy.
Ny fanadiovana ny tempoly
Mba handinihana lalina an'io lohahevitra io, i John dia milaza amintsika ny fomba nandroahan'i Jesosy ny mpivarotra ho any ivelan'ny tokotanin'ny tempoly. Pejy fanamarihan'ny Baiboly amin'ny pejy eo amin'ny fanontaniana hoe mitovy ihany ve io fanadiovana ny tempoly io izay voalazan'ny evanjely hafa hatramin'ny faran'ny asan'i Jesosy teto an-tany sa nisy hafa iray hafa tamin'ny voalohany. Na eo aza izany dia mitatitra momba izany eto i Johannes noho ny dikany izay misy azy io.
Ary i Jaona indray dia nametraka ny tantara ao amin’ny tontolon’ny Jodaisma:... efa akaiky ny Paskan’ny Jiosy (and. 13). Ary Jesosy dia nahita olona tao amin’ny tempoly nivarotra biby sy nanakalo vola - biby izay naterin’ny mpino ho fanatitra ho famelan-keloka sy vola nampiasaina handoavana ny hetran’ny tempoly. Nanomana loza tsotra i Jesosy ary nandroaka ny olona rehetra.
Nahagaga fa nisy olona iray afaka nandroaka ireo mpivarotra rehetra. (Aiza ​​ny polisy ao amin'ny tempoly raha mila azy ireo ianao?) Ataoko fa fantatr'ireo mpivarotra fa tsy eto izy ireo ary maro amin'ny sarambabem-bahoaka koa no tsy tia azy ireo eto - Jesosy dia nanao izay tokony hataon'ny olona sahady. tsapa, ary fantatr’ireo mpivarotra fa betsaka noho izy ireo. Noresahin’i Josèphe ny fiezahana hafa nataon’ny mpitondra jiosy hanova ny fomba amam-panao tao amin’ny tempoly; Tamin'ireny tranga ireny dia nitombo ny tabataba teo amin'ny vahoaka fa natsahatra ny ezaka. Tsy nisy na inona na inona nolavin’i Jesosy tamin’ny olona mivarotra biby hatao sorona na manakalo vola hatao fanatitra any amin’ny tempoly. Tsy nilaza na inona na inona momba ny saram-panakalozana nalaina tamin’izany izy. Ny toerana nofidiany ho amin’izany no nomelohiny: Teo am-panaovana ny tranon’Andriamanitra ho trano fitehirizam-bokatra izy ireo (and. 16). Nahazo tombony izy ireo noho ny finoana.
Noho izany dia tsy nisambotra an’i Jesoa ny mpitarika jiosy – fantatr’izy ireo fa nankasitrahan’ny vahoaka izay nataony – fa nanontany Azy kosa izy ireo hoe inona no nanome azy fahefana hanao izany (and. 18). Tsy nohazavain’i Jesoa tamin’izy ireo anefa hoe nahoana ny tempoly no tsy mety amin’ny tabataba toy izany, fa nivadika ho endrika vaovao tanteraka: ravao ity tempoly ity, ary amin’ny hateloana dia havelako hitsangana indray izy (and. 19 Baiboly Zurich). . Jesosy dia niresaka ny amin’ny vatany, izay tsy fantatry ny mpitondra Jiosy. Tsy isalasalana àry fa noheverin’izy ireo ho mahatsikaiky ny valin-teniny, nefa tsy nosamborin’izy ireo koa izao. Asehon’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty fa nanana fahefana feno hanadio ny tempoly izy, ary efa nanondro ny fandravana azy io efa akaiky. Rehefa namono an’i Jesosy ireo mpitarika Jiosy, dia noravany koa ny tempoly; satria ny fahafatesan’i Jesosy dia nahatonga ny fanatitra rehetra natolotra teo aloha ho tsy manan-kery. Tamin’ny andro fahatelo taorian’izay, dia nitsangana tamin’ny maty i Jesosy ary nanorina tempoly vaovao — ny fiangonany.
Ary maro ny olona, ​​hoy i Jaona amintsika, no nino an’i Jesosy satria nahita ny famantarana nataony. Ao amin'i Johannes 4,54 voalaza fa ny toetra faharoa; izany, raha ny hevitro, dia mitondra any amin'ny fehin-kevitra fa ny fanadiovana ny tempoly dia notaterina araka ny filaharany satria izany dia manondro ny tena momba ny asa fanompoana an'i Kristy. Nofaranan'i Jesosy ny sorona tao amin'ny tempoly sy ny fombafomba fanadiovana - ary nanampy azy tsy nahy ny mpitarika jiosy mba handringana azy ara-batana. Tao anatin'ny telo andro anefa, ny zava-drehetra dia tokony hovana ho divay - ny fombafomba maty dia ho lasa ody farany indrindra amin'ny finoana.